China LYNDIAN T Series Interactive Ewepụghị Panel Display Android 8.0 3 + 32G emepụta na suppliers | Asụsụ Lindian
Zitere anyị email nkọwa
Guangzhou Lindian Intelligent Technology Co., Ltd bụ ọkachamara na-emepụta ihe raara nye nyocha, mmepe, imewe, mmepụta, ahịa na ọrụ nke bọọdụ mmekọrịta, bọọdụ amị, mbadamba ụyọkọ mmekọrịta, mmekọrịta mmadụ na kọmputa na ngwaahịa yana azịza, ọtụtụ ndị na-eji agụmakwụkwọ, nkuzi , nzukọ nzukọ, ihe ngosi azụmahịa na mpaghara ọha.
Na Elu ihe onwunwe, elu & ọhụrụ technology na nwere a elu-tech R & D center, gụnyere 30 injinia na technicians, Iji na-enye ihe kasị mma ngwaahịa na ọrụ, anyị wuru a oge a mma management usoro nke bụ na nlezianya dị na mba ụkpụrụ.and nwetara OA, CCC, ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001 ROHS na-egosi.
Ngwaahịa anyị na-ewu ewu na Europe, America, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Middle East na Africa wdg OEM na ODM niile anakwere, Ma ịhọrọ ngwaahịa ugbu a na katalọgụ anyị ma ọ bụ chọọ enyemaka injinia maka ngwa gị. Anyị na-na-na-achọ na-emepe emepe ọhụrụ anyị na ngwaahịa na-eju afọ ọhụrụ choro si ahịa. Ọdịdị dị elu, ọnụ ahịa ezi uche na ọrụ dị mma bụ nkwa anyị nye ndị ahịa anyị niile
Otutu onyinye mmetuta anyi bia na akwukwo kachasi elu na onu ogugu di omimi na ahia. Họrọ site na nha ise dị iche site na 55 ruo 98 sentimita na oghere nhọrọ na PC na interface anyị pụrụ iche nke emere maka nnukwu touchscreens. All anyị 4K mkpebi meziri abịa juru na atụmatụ
Ndi otu ndi okacha amara n’ime anyi nwere ike inye aka n’oru na nkwado n’ime oge nile nke ndi Lindian
Site na ogo dị elu na ndozi dị ala, Lindian bụ otu n'ime ihe ngosi mmekọrịta kachasị elu na ahịa.
Mkparịta ụka mmekọrịta na-agbanwe agbanwe na-agbanwe arụmọrụ azụmahịa gị iji mee ka nkwukọrịta siri ike, njikọta na mmekorita site na iji teknụzụ mmekọrịta.
Dika mkpa ichoro oghere omumu ihe, otua ka icho oru uzu na klas. Lindian na-anabata imikpu miri emi na gburugburu ime ụlọ klaasị nwere ọgụgụ isi.
Ngwunye anyị na-emeri mmetụ aka na-agbanwe ọdịnihu nke klaasị
Mmetụta mmekọrịta ndị a na-emetụ n'ahụ na-etu ọnụ maka mkpebi 4K, 30-touch touch, oge nzaghachi ngwa ngwa, mbelata nchekwa na njikwa njikwa, na-eme ka ha zuo oke maka otu ndị chọrọ ị nweta ihe ga-eme na ntanetị ma ọ bụ pụọ na netwọkụ. Nweta usoro igwe ojii gị na ntọala gị site na iji sistemu profaịlụ anyị.
Wuru na-adịgide, niile meziri-abịa na a keukwu emeputa akwụkwọ ikike.
Dika iji teknụzụ eme ihe n'ime agụmakwụkwọ na-abawanye, etu a ka ọrụ achọrọ iji jikwaa mmelite, nwelite na inye nkwado ndị ọrụ. Nke a bụ ihe dị mkpa maka IT na ndị njikwa sistemụ mgbe ha na-enyocha teknụzụ AV ụlọ akwụkwọ. Ọbụghị naanị na Clevertouch gị chọrọ ibute ebumnuche mmụta, ebe ọ bụ na ọdịmma nke ndị nkuzi ga - adị mfe, ijikwa ya.
Nke gara aga: LYNDIAN T Series Interactive Ewepụghị Panel Display gam akporo 8.0 2 + 16G
Osote: LYNDIAN T Series Interactive Ewepụghị Panel Display gam akporo 8.0 4 + 32G
75 Interactive Ewepụghị Panel Display
Interactive Ewepụghị Panel Display
Mmekọrịta Ewepụghị Panel Display Education
Mkparịta ụka Ngosiputa Ngosipụta mmekọrịta
Interactive Ewepụghị Panel Ngosipụta
Smart Interactive Ewepụghị Panel Mere Display
Aka mmekọrịta Flat Panel Display
LYNDIAN T Series Interactive Ewepụghị Panel Display ...
LYNDIAN Smart Blackboard mmekọrịta bọọdụ
LYNDIAN 37.7 inch gbatịpụrụ LCD Display
LYNDIAN 36 inch gbatịrị LCD Display
LYNDIAN 19.5 inch gbatịrị LCD Display
Smart Interactive Ewepụghị Panel Mere Display, 75 Interactive Ewepụghị Panel Display, Mmekọrịta Ewepụghị Panel Display Education, Niile Na Otu Mmekọrịta Ewepụghị Panel, Mkparịta ụka Whiteboard na-eweta mmekọrịta, Aka mmekọrịta Flat Panel Display,